Vokatra tsy ampy eto an-toerana : voarara izao ny fanondranana saribao, siramamy, katsaka… | NewsMada
Vokatra tsy ampy eto an-toerana : voarara izao ny fanondranana saribao, siramamy, katsaka…
Tsy azo atao ny manondrana vokatra tsy ampy eto an-toerana ho fisorohana ny fiakaran’ny vidin-javatra ilaina andavanandro sy ny fanararaotana samihafa. Nanapa-kevitra momba izany ny minisiteran’ny Varotra sy fanjifana.
Nasian-teny amin’ireo vokatra tsy azo aondrana ireo ny arina fandrehitra na saribao, izay mahatratra 500 t isan-taona ny alefa any ivelany. Najanona aloha izany fanondranana izany. “Tsy maintsy tsinjovina ny tinadin’ny tsena eto an-toerana, satria fampiasan’ny tokantrano maro ny saribao, koa raha tsy mitandrina isika, hiteraka fahavoazana ny tsy fahampian’ny tolotra, midika ny fahalafosany, izay efa miantraika amina tokantrano maro”, hoy ny minisitry ny Tontolo iainana, ekolojia, voaary sy ny ala, Ndahimananjara Johanita. Mitaky fambolen-kazo amin’ireo mpanondrana izany, satria ny ala voajanahary, raha ny tokony ho izy, tsy azo kapaina hanaovana saribao.
Eo ny fanararaotana eto an-toerana, indrindra ireo mpitatitra. Milaza izy ireo fa noho ny faharatsian’ny lalana. Raha tamin’ny fotoam-pahavaratra, manodidina ny 15.000 Ar ny iray kitapo, amin’izao maintany izao, tafakatra avo roa na telo heny ny vidiny. Mitovy tamin’ny taon-dasa ihany ny miakatra raha avy amin’iny faritra Anjozorobe sy Manjakandriana iny. Raha atao ny kajikajy, toa mora indray ny gazy noho ny saribao, saingy ny olana, tsy mety vidina an-tsinjarany ny gazy, tsy zakan’ny fahefa-mividin’ny maro.
Harahi-maso ny tahiry
Nanamafy izao famerana ny fanondranana entana izao ny minisiteran’ny Varotra sy ny fanjifana, Tazafy Armand. Tsy ampy ny tolotra ho an’ny tsena anatiny, ohatra, ny siramamy sy katsaka, nefa misy manondrana ireo. Noho izany, nilaza ny ao amin’ny minisitera fa hanara-maso ny tahiry sy ny fanafenana entana mba hampiakarana ny vidiny. “Tsy fanenjehana olona akory ny antony fa ny tsy hisian’ny fisondrotry ny vidin’entana noho ny fanararaotana”, hoy ny minisitry ny Varotra sy ny fanjifana, Tazafy Armand. Hiady ihany koa ny minisitera amin’ny varotra tsy manara-dalàna, miteraka fifaninanana tsy ara-dalàna. Tsy mitovy amin’ny saran-dalana amin’ny taxi-be, mbola azo hifampiraharahana, ny vidin-javatra ilaina andavanandro. Betsaka ny mpivarotra ambongadiny manararaotra amin’ny fomba samihafa mamono ny mpanjifa.
Une réponse à "Vokatra tsy ampy eto an-toerana : voarara izao ny fanondranana saribao, siramamy, katsaka…"
Ilaina 27/07/2016 à 11:46
Salama tompoko o!
Mety ny fanampaha-kevitra io fa ny olana mipetraka fotsiny de ovina no ampiarina izany!
Mahagaga fa rehefa manao ny tsy mety foana ny mpandraraha eto @ tanana izay vao mihetsika ny manampahefana (sa rehefa nahazo tombotsoa tao anatiny fotoana fohy ve ny sasany, izay nareo vao mihetsiky handrara ny fanaony ry zareo @ zay , aiza kosa e !
). Madritry ny fotoana tsy ietsehiny izy ireo dia mijaly ny vahoaka. Noho izany, manova ny fomba fiainana ny vahoaka satria ary manahy ny ho avy hatrany. Raha ny akora saribao ohatra diA (akora voalohany fampiasa eto Madagascar). Miteraka “effet-d’entrainement” ratsy ny fiekara-bidiny io akora io ! miaka bidy daholo avokoa ny zavatra rehetra na ny miakina na ny tsy miakina @ saribao, ary tsy miverina @ normale intsony ny vidiny izy ireo ! efa nahita ve isika we nihembidy ny vidiny anana eny antsena, ny mofo dopaina ……. Ny malagasy dia olona “rationnel” ary olona liana ny ho avy daholo. Noho ny fiahiny dia mapiditra “prime de sécurité” ao anatiny ny vidinjavatra ry zareo mba isorohany ny fiovahovany vidiny akora eto @ tanana ! (Ny ahiahy tsy hiavanana hoy ny sasany ), hany ka mahatonga ny fahatrana lavareny eto @ tanana izany, ny manana fahefamividy dia afaka mividy foana, ny tsy manana mo de korosofanana foana !
Ny fiakarany vidim-piainana no tokony tandroviny manapahefana voalohany, ary efa ao anatiny programma ara-kasa ry zareo angamba izany. Ny fiainany malagasy tsy tokony lalaovina hoatra izao! Io ne tsy afaka formatena de miverina @ laoniny e !
Hevitra iny !